Wada-hawlgalayaasha Wadajir ee Ka-hortagga Madoowga & Looga Hortago Cadaaladda Midab-kala-sooca
Mu'asasada 'McKnight Foundation' ayaa dhowaan ku biirtay Wadajirka 'Philanthropic Collective' si loola Dagaallamo Madowga iyo Looga Hortago Cadaaladda Midab-kala-sooca. Tani waa war-saxaafadeed ay soo saareen Luulyo 14, 2020.
The Wadajirka 'Philanthropic Collective' si loola Dagaallamo Madowga iyo Looga Hortago Cadaaladda Midab-kala-sooca- isbahaysi aasaasi ah iyo ururo samafal oo la sameeyay ee ka jawaabaya dilkii George Floyd –waxay soo saareen bayaan cambaareyn ka soo horjeedka madow iyo midab takoorka Minnesota. Isagoo ugu yeeraya isbadal xaga maareynta hay'ad samafal, wadajirka wuxuu ku dhawaaqay inuu kor uqaadi doono $25 malyan uuna ku casuumayo lacago dheeri ah oo lagu maal galiyo maalgalinta himilada iyo taariikhiga ee Black-Led Movement.
Wadajirka ayaa aragti saddex geesood ah u leh hay'adaha deeqaha ee Minnesota: (1) in la maalgeliyo Sanduuqa Dhaqdhaqaaqa Mad-madow ee MN Holistic; (2) inay saxeexdo qoraal dhiirran oo geesinimo leh oo adkeynaysa mas'uuliyadda tabaruca ee shaqada ka hortagga cunsuriyadda; iyo (3) ku soo biir miiska isbeddelka muddada-dheer si loo aasaaso oo loo wanaajiyo siyaasadaha, habraacyada, iyo dhaqannada lagu wajahayo ka-hortagga Madowga iyo ka shaqeynta caddaaladda midab-takoorka.
Sanduuqa Dhaqdhaqaaqa Madowga Madowga Madowga ee MN Holistic wuxuu ku keydsan yahay Nexus Community Partners. Sanduuqa wuxuu raadinayaa maalgalin dheeri ah oo sii socota si uu u adkeeyo awooda, hogaaminta, iyo bilicda bulshada madow ee Minnesota si ay u maal gashadaan xalal hal abuur leh dhamaan cadaalada isbedelka, amniga, dhaqaalaha, caafimaadka, iyo samaqabka. Intaa waxaa sii dheer, Sanduuqu wuxuu sii wadi doonaa deegaanka dabiiciga ah ee isbeddelka bulshada ee Mad-madow ku horseeday Minnesota sidii dhaq-dhaqaaq wax ku ool ah oo is-goysiya oo gubanaya isla markaana joogtaynaya isbedelka si loo saameeyo bulshooyinka dheeraad ah ee midabka iyo dhammaan dadka. Waxaa hogaamiyay habraaca deeqda ee kaqeybgalka bulshada, Sanduuqu wuxuu adeegsan doonaa agab loogu tala galay baahiyaha mudada-gaaban iyo kuwa muddada-dheerba ee lagu hagi lahaa aragti si loo beero oo kor loogu qaado saameyntooda sanadaha soo socda. Kooxda ayaa la shaqeyneysa Muuqaalo Madoow, oo ah hay'ad dhaqdhaqaaqa dadka madow ee fadhigeedu yahay Minnesota si ay u qaabeeyaan hanaan lagu maalgeliyo horumarinta iyo bixinta.
“Qeybta hay'ad samafal ee hay'addu leedahay waxay leedahay ilaha, saameynta, iyo mowqifkeeda sida isku xirnaanta waaxaha, waana waajib inay ku hawl gasho xisaabinta qoto dheer ee lagu dhisayo, lagu bixiyo, lana wadaago awoodda si kor loogu qaado codka dadka ay sida ugu badan saameyn ugu yeesheen. midab-kala-sooca habbeysan iyo sinnaan la’aanta, ”ayay tiri Lulete Mola, oo ah ku-xigeenka madaxa saamaynta bulshada ee Ururka Haweenka ee Minnesota iyo gudoomiye ku-xigeenka wadajirka. "Waqtigan la joogo wuxuu ugu baaqayaa hay'ad samafal in ay qaado tillaabo macno leh oo duurka ah si loo ballaariyo jaangooyooyinka ku saabsan kala-duwanaanta, sinnaanta, iyo ka-mid-noqoshada oo ay si geesinimo leh ugu socoto tallaabada cunsuriyadda iyo caddaaladda midab-takoorka."
Qoraalkeeda, kooxdu waxay ku boorineysaa hay'adaha samafalka ah ee Minnesota inay mideeyaan awoodooda wadajirka ah, maalgashadaan howlaha cadaanka ee madowga ku hogaaminta leh, oo ay si geesinimo leh u cambaareeyaan ka soo horjeedka madow, rabshadaha booliska madow, iyo cunsuriyada ay la kulmaan dadka Madow, dadka asaliga ah, iyo dhammaan dadka midabka leh . Bayaanka ayaa ka codsaday hay'adda samafalka inay ku wareejiso codadka Madoow, aqoonta, iyo dhaqdhaqaaqa dadaalkan raadinta isbeddelka maadaama uu ku sii jeedo isbedel macno leh.
Waxaan qiraynaa in garoonku leeyahay cilado. Falalka 'Philanthropy' waxaa lala xiriirin karaa isbeddelka bulshada iyo siyaasadeed ee waddankan, laakiin waxaa sidoo kale lala xiriirin karaa taariikh dheer oo sinnaan la’aanta iyo dhaawacyada Black, Asaliga, iyo bulshooyinka midabka leh. Wadajirkaan, waxaan weydiineynaa, 'Intee in ka badan ayuu sadaqadu noqon kareysaa?' Ma u bedeli karnaa xirfadleyda haya hay'ad samafal oo mas'uuliyad culus u sareysa, annagoo qiraya in caddaaladda dhabta ah ee jinsiyadu ay u baahan tahay awood dheellitiran oo bulsho, siyaasadeed, iyo dhaqaale? Falalka 'Philanthropy' waxay u baahan yihiin inay diyaar u ahaadaan inay ka baxaan oo ay qaadaan tillaabo macno leh si loo beddelo nidaamyada, dhaqammada, iyo siyaasadaha ka dhex jira hay'adaha, duurka, iyo bulshada, "ayay tiri Repa Mekha, madaxweynaha iyo madaxa fulinta ee iskaashatada bulshada ee Nexus, iyo gudoomiye kuxigeenka wadajirka , oo ay weheliso Chanda Smith Baker, oo ah kuxigeenka sare ee saamaynta bulshada ee Foundation Foundation.
Ku biir iskaa wax u qabso ee ku saabsan caddaaladda midab-takoorka: MNPhilanthropicCollective.org
Wadajirka 'Philanthropic Collective' si loola Dagaallamo Madowga iyo Looga Hortago Cadaaladda Midab-kala-sooca ayaa ah iskaashi sii kordhayo ee soo socda:
Wadashaqeynta Maamulaha Guryaha ee Minnesota
Mu'asasada Northwest Minnesota
Hoyga badbaadinta hubka
Ku Saabsan Wadajirka Kooxda 'Philanthropic Collective' si loola Dagaallamo Madowga & Looga Horkeeno Cadaaladda Jinsiga
Ururo samafal oo ku nool gobolka Minnesota, hadafkeena wadajirka ah ayaa ah inaan abuurno himilo fog oo mustaqbalka ah ee nidaamyada wax looga beddelo si loo hormariyo caddaaladda midab-takoorka. Waxaan ilaalinaynaa awooda, hogaaminta, iyo bilicda jaaliyadaha madow ee Minnesota si ay u maal gashadaan xalal hal abuur leh dhamaan cadaalada isbedelka, amniga, dhaqaalaha, caafimaadka, iyo samaqabka. Wadajirka ayaa ku dhaqaaqi doona ficil geesinimo leh, ficil aragti leh si uu u raaco codadka iyo jihada dadka inta badan saameyn ku yeeshay kuna maalgashadeynay Kheyraadkeena badan si loo badalo nidaamyada loona xaqiijiyo cadaalada midabka.
Samaynta Nidaamyada Isbedelada Sinnaanta
Barashooyinka Hore ee Barnaamijka Bulshooyinka firfircoon & sinnaanta ee McKnight
By David Nicholson, Erin Imon Gavin Diisambar 2020